Vaovao momba ny Fahalalahana Miteny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2018 11:58 GMT
Araka ny voalazan'ny Reporters Sans Frontières (RSF) sy ny Human Rights Watch, ireto ny fivoaran'ny rahona manembatsembana ny Fahalalahana Miteny tanatin'ny herinandro lasa teo:
Tonizia: Raran'ny governemanta ny fanaovan'ny sindikà vaovaon'ireo mpanao gazety Kaongresy Fanorenana. Taterin'ny RSF fa nanapa-kevitra ny handrara ny fanatanterahan'ny Sindikan'ireo Mpanao Gazety Toniziana (SJT) kaongresy fanorenana nokasaina hatao ny 7 Septambra izao ny governemanta.
Libia: Miteraka adihevitra ny Fisamborana ny Mpanoratra iray ao anaty Aterineto. Taterin'ny HRW fa nihazona an'i al-Mansuri nanomboka ny Janoary lasa teo ny hery fiarovana anatiny ao Libia, anatin'ny ezaka hampanginana mpanoratra iray manana fomba fijery miaty fanakianana. Jereo ihany koa ny fanairan'ny RSF eto (pejy voafafa).
Sina: Navotsotra i Ma Yalian, mpanohitra anaty aterineto, rehefa nahefa ny saziny. Araka ny voalazan'ny RSF, “62 ireo mpanohitra hafa mbola voafonja ao Sina noho ny fanaparitahana lahatsoratra sy fampahalalàna henjana ho an'ireo manampahefana ao anaty Aterineto.”
Maldiva: Navotsotra i Mohamed Zaki, mpanohitra anaty aterineto, rehefa voafonja nandritra ny roa taona sy nambenana an-trano nandritra ny 19 volana. Araka ny voalazan'ny RSF dia “navoaka ny 18 Aogositra teo (roa volana taorian'ny famoahanà an'i Fathimath Nisreen, mpikambana iray hafa avy ao amin'ny Sandhaanu) i Zaki, izay nanampy nanaparitaka ilay vaovaon'ny Sandhaanu fandefa anaty mailaka.”
Belarosy: manivana ireo sariitatra fanesoana anaty Aterineto ny KGB. Mitatitra ny RSF fa “nanao bemidina tany aminà trano fonenana telo tao Minsk sy tao amin'ny tanàna andrefan'i Grodno ny pôlisy miafina Belarosiana, trano voalaza fa an'ireo tanora mpikambana ao amin'ny hetsiky ny mpanohitra “The Third Way” (Ilay Fomba Fahatelo) izay mamorona sariitatra maneso, mihetsiketsika (amin'ny dika Flash) hozaraina anaty Aterineto.”